इजरायल प्यालेस्टाइनको युद्धमा कुन देशहरू कसका पक्षमा ? | SAMAJBAD
इजरायल प्यालेस्टाइनको युद्धमा कुन देशहरू कसका पक्षमा ?
एजेन्सी : प्यालेस्टाइन र इजरायल बीच एक हप्ता पछि पनि रक्तपात जारी छ। प्यालेस्टाइनको विद्रोही संगठन हमासबाट रकेट आक्रमण भइरहेको छ र इजरायल पनि आक्रामक प्रतिकारमा संलग्न छ। सयौं यस संघर्ष मा अब सम्म गएको छ। इजरायली आक्रमणले गाजामा ठूलो क्षति पुर्यालएको छ। दुई पक्षबीचको यो द्वन्द्व अब एक विश्वकै मुद्दा बनेको छ। यस द्वन्द्वलाई रोक्न कोशिस भइरहेको छ र यस प्रसंगमा धेरै देशहरू विभिन्न धारामा विभाजित छन्। अधिकांश इस्लामी देशहरूले प्यालेस्टाइनलाई समर्थन गरिरहेका छन् । तर इजरायली प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतान्याहूले २५ देशलाई उनीहरूलाई सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन्। अमेरिकाले इजरायलसँग यसको निकटता कसैबाट लुकेको छैन। हमासलाई एउटा कट्टरपन्थी संगठन ठान्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघमा हमासको विरूद्धमा निन्दाको प्रस्ताव पनि ल्याएको छ, जुन अस्वीकृत भएको थियो । अमेरिकाले युद्धविराम र शान्तिको लागि अपील गरेको छ र कूटनीतिक तहमा पनि प्रयत्न भइरहेको छ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनले इजरायली प्रधानमन्त्री बिन्यामिन नेतान्याहूसँग कुरा गरिसकेका छन् । प्यालेस्टाइनले रोकेट हमलाको जवाफमा अमेरिकाले इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारलाई समर्थन गरेको छ। युरोपेली देशहरूले पनि हमासलाई कट्टरपन्थी संगठनका रूपमा लिन्छन् र युरोपका प्रमुख देशहरू बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले इजरायललाई समर्थन जनाएका छन्। बेलायतमा केही संगठनहरूले प्यालेस्टाइनहरूको समर्थनमा प्रदर्शन गरे। बेलायत सरकारले इजरायलको आक्रमणको विरोध गर्न खोजिएको छ। मानिसहरूले बेलायतमा इजरायली दूतावास बाहिर पनि विरोध प्रदर्शन गरे। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले गाजामा इजरायल र प्यालेस्टिनी कट्टरपन्थीहरूको बिच चलिरहेको द्वन्द्वमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे र दुबै पक्षको विवादको समाधानमा जोड दिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्यहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स सम्मिलित छन् जसले भिटो पावर राख्छन्। यदि सुरक्षा परिषद्मा इजरायल र प्यालेस्टाइनको मुद्दामा भेटोको आवश्यकता छ भने इजरायलले फाइदा लिन सक्छ। अरु स्थायी सदस्यहरुमा रसिया र चीन पनि पर्छन्। यसका साथै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहूले समर्थनका लागि २५ देशमध्ये अष्ट्रेलिया, अल्बानिया, अष्ट्रिया, ब्राजिल, क्यानडा, कोलम्बिया, साइप्रस, जर्जिया, हंगेरी, इटली, स्लोभेनिया र युक्रेन शामिल छन्।
इस्लामिक देशहरूको बारेमा कुरा गर्दा, उनीहरूले इजरायलको कडा विरोध गरे र प्यालेस्टाइनको भूमिमा हिंसा रोक्ने कुरा गरिरहेका छन् । साउदी अरेबिया, टर्की, इरान, पाकिस्तान, कुवेत र धेरै खाडी देशहरूले इजरायलको खुलेआम निन्दा गरेका छन्। साउदी अरेबियाको विदेश मन्त्रालयले प्यालेस्टाइन परिवारलाई यरूशलेमबाट निकाल्ने इजरायली योजनालाई अस्वीकार गरेको छ। प्यालेस्टाइनीहरूले स्वतन्त्र देश पाएका छन् । जसको राजधानी पूर्वी यरूशलेम हुनेछ टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तय्यप अर्दोआनले इजरायलको बिरूद्ध कडा अडान लिएका छन्।अर्डोआनले इजरायललाई यदि सारा विश्व मौन भयो भने पनि टर्कीले आवाज उठाउने चेतावनी दिएका छन् । जसरी मैले सिरियाको सिमानामा आतंककारीहरूको बाटो रोके, त्यस्तै मस्जिद ए अक्साको हातले उनीहरूको हात भाँच्नेछ एर्दोगानले भने । टर्कीले इजरायलमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि अपील गरेको छ। इरानले पनि प्यालेस्तिनीहरूलाई खुलेआम समर्थन गरेको छ। साथै, संयुक्त राष्ट्र संघ र इस्लामिक देशहरूलाई इजरायललाई प्यालेस्टाइनमाथि आक्रमण गर्न रोक्न अपील गरे।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार, खम्नाईले भने, यहूदीहरू केवल शक्तिको भाषा बुझ्दछन्। त्यसकारण प्यालेस्तिनीहरूले आफ्नो शक्ति र प्रतिरोध बढाउनु पर्छ ताकि अपराधीहरू आत्मसमर्पण गर्न र उनीहरूको क्रूर कार्यहरू रोक्न बाध्य हुनेछन्। प्यालेस्टाइनमाथिको हमलामा पाकिस्तानले पनि इजरायलको खुल्लम आलोचना गरिरहेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहरिन, मोरक्को र सुडानले भने इजरायलसँग सम्झौता गरेका छन्। इराकी राष्ट्रपति बारहम सलिहले प्यालेस्तिनी बिरूद्धको हमलाको भर्त्सना गरेका छन र प्यालेस्तिनीहरुसंगको हक प्राप्त गर्न एकजुटता देखाएको छ। इजरायलको छिमेकी देश जोर्डनका राष्ट्रपति अब्दुल्लाले इजरायली आक्रमण रोक्न गहन कूटनीतिक तहमा प्रयास भइरहेको बताएका छन्। अर्को छिमेकी देश लेबनानका राष्ट्रपति मैकान अउनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्यालेस्टाइन बिरूद्ध इजरायलको आक्रामक आक्रमणमा हस्तक्षेप गर्न अपील गरेका छन्। इजिप्ट, एक छिमेकी देश इजिप्टले दुई पक्षबीच युद्धविरामको प्रयास गरिरहेको छ।
बैठक पछि जारी विज्ञप्तिमा ओआईसीले चेताउनी दियो कि जानाजानी धार्मिक संवेदनशीलता जगाउन खोज्ने, इजरायलले प्यालेस्टाइन जनता र इस्लामिक संसारको भावना जगाउने प्रयासले भयानक नतिजा भोग्नुपर्नेछ। भारतले यस विषयमा दुई पक्षलाई सन्तुलनमा राखेको देखिन्छ। प्यालेस्टाइन र इजरायल दुबैसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छ।त्यसकारण भारतले दुबै पक्षलाई संयम बन्न अपील गरेको छ। रसियाले यस हिंसाको कारण आफ्नो सुरक्षाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको द्वन्द्वका कारण रसियाले आफ्नो सुरक्षा प्रभावित भएको बताएको छ। उता इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको द्वन्द्वको बहानामा चीनले अमेरिकालाई लक्षित गरेको छ।
चीनले भनेका छ कि अमेरिकाले आफूलाई मानव अधिकारको रक्षाकर्ता र मुसलमानको हितैषी भन्दै इजरायलसँगको झगडामा मारिएका प्यालेस्टाइनलाई नियालेको छ। प्यालेस्टाइनहरूलाई कसरी युद्ध र प्रकोपको अवस्थामा धकेलीयो अमेरिकाले देख्न सक्दैन । चीनले भनेका छ कि अमेरिका केवल शिनजियांग का विगर मुसलमानको बारेमा चिन्तित छ। तर प्यालेस्तिनी मुसलमानहरुको बारेमा मौन छ । प्यालेस्टिनी कट्टरपन्थी र इजरायली सेना बीचको झगडा एक हप्ता पछि पनि जारी छ। यस संघर्षको प्रक्रिया यरूशलेममा गएको एक महिनादेखि अशान्ति पछि शुरू भएको छ। पूर्वी यरूशलेमको शेख जरा इलाकाबाट प्यालेस्टाइन परिवारहरूलाई निकाल्ने धम्की दिएपछि यो सुरु भएको थियो, जसलाई यहूदीहरूले आफ्नो भूमि भनेर दावी गर्छन् र त्यहाँ बसोबास गर्न चाहन्छन्।यस कारणले गर्दा त्यहाँको अरबी जनसंख्या भएको ठाउँमा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झगडा भएको थियो।
Previous articleप्यालेस्टाईनमा बम बर्षाईरहेको ईजरायलमाथि हिजबुल्लाहको रकेट हमला
Next articleमाओवादी केन्द्रका नेता पाण्डेको पेट र कम्मरमा २ वटा गोली प्रहार